Ciidamada Kenya oo sheegay iney dileen seddex al-Shabaab ah mid kalana qabteen - Halbeeg News
Ciidamada Kenya oo sheegay iney dileen seddex al-Shabaab ah mid kalana qabteen
hub ay soo bandhjgeen ciidamada Kenya oo ay sheegeen in ay gacanta uga dhigeen Shbaab Xuquuqda sawirka: online
NAYROOBI(HALBEEG)-Ciidamada millatariga Kenya ayaa sheegay in ay dileen saddex dagaalyahan mid kalena ay nolosha kusoo qabteen kaddib markii iyaga iyo kooxda Shabaab ay isku fara saareen soohdinta u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya ayaa lagu sheegay in iska hor imaadka ka dhexeeya ciidamadadooda iyo shabaab uu ka dhacay agagaarka Buura Xaash oo ka tirsan gobolka Gedo.
Wasaaradda ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay saddex qori iyo saanad kala duwan
Afhayeenka ciidamada millatariga Kenya, Paul Njuguna ayaa sheegay in iska hor imaadkani uu dhacay xilli ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ay ku jireen howlo roondo ah.
“Ciidamadayada waa kuwo mar walba heegan ah oo feejigan waxayna heegan ugu jiraan baacsiga kooxaha argagixisada ah si ay u sugaan ammaanka iyo xasilloonida Kenya” wuxuuna intaa sii raaciyay inay sii wadi doonaan taageeraha ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee xasilinta Soomaliya.
Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa laba maalmood kadib markii bam gacmeed lagu weeraray goob makhaayad ah oo ku taalla magaalada Dhoobley kaasoo ay ku dhaawacmee saddex qof oo Kenyan ah oo ka shaqeeya howlaha dhismaha, iyada oo weerarkaasi masuuliyaddiisa ay sheegteen kooxda Shabaab.
Diyaaradda Boeing 737 Max 8 oo si isxigxigta looga mamnuucay waddamo badan
Midowga Yurub oo Soomaaliya ku taageeraya ku dhaqaaw 100 milyan oo lagu kobcinayo dhaqaalaha